एमाले र माओवादी एकताले राजनीतिक स्थायित्वलाई मदत पुग्छ
Saturday, 28 Oct, 2017 1:05 PM
जीवनको लामो समय बामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहनु भएका नीलाम्बर आचार्यले बाम राजनीति छोडेपछि स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक र चिन्तकको परिचय बनाउनु भएको छ । संविधानसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य मनोनित हुनुभई संवैधानिक समितिको सभापतिको भूमिका समेत निभाउनु भएका आचार्य पछिल्लो समय नेपाल–भारत प्रवुद्ध ब्यक्ति समुहको सदस्य समेत हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचान आइरहेका बेला नेपाली राजनीतिमा बामपन्थी दलहरुबीच भएको एकताले राजनीतिमा ल्याउने प्रभाव र असरका बारे आचार्यसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
तपाईं त पहिले बामपन्थी नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यागेर पछि कांग्रेस निकट रहनु भयो । अहिले बाम एकताको अभियान चलेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
एकबेला म कम्युनिष्ट थिएँ, छोडेँ । त्यो सत्य हो । तर मैले कांग्रेसको कुनै सदस्य भएर काम गरेको छैन । म राजनीतिक चिन्तक मात्र हुँ । एउटा राजनीतिक चिन्तकको दृष्टिले भन्छु– यहाँ जे समस्याको समाधान खोजिन्छ, प्रजातान्त्रिक रुपबाट खोजिनु पर्छ । राजनीतिक शक्तिहरुले प्रजात्रान्त्रिक पद्दतिलाई स्थापित गराउन, लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित, मजवुत र देशको हित अनुकुल बनाउन, समग्रमा देशको अवस्थामाथि उठाउनकै लागि गठबन्धनमा बाँधिएका हुन्छन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ । यसलाई नराम्रो रुपमा लिनु जरुरी छैन । प्रजातान्त्रिक पद्दतिभित्र पनि एउटा दूरी हुन्छ, जुन देश विकासका लागि पनि फलदायक हुन्छ । तर ती प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भित्रका दूरी कटुता उत्पन्न हुनेगरी भने हुनु हुँदैन । हिजो माओवादी र कांग्रेस मिलेजस्तै भोलि कांग्रेस र एमाले मिल्न पर्ने हुन्छ । यो गठबन्धनलाई नराम्रो होइन सकरात्मक र प्रजातान्त्रिक निकासमा जाने अर्थमा लिएको छु ।
बाम पार्टी एकीकरणले प्रजातन्त्रमा खतरा छ भन्छन् नि त ?
त्यस्तो त हुनै सक्दैन । कांग्रेसले भनेको कुरालाई लिनु भएको हो भने त्यो त उसले आउने चुनावमा आफ्नो स्थानलाई केन्द्रित गरेर बोलेको होला । कसरी आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सकिन्छ भनेर दलले चुनावी मुखमा यस्तो बोल्न सक्छन् । हिजो कांग्रेस आफैं माओवादीसँग मिल्दा अधिनायकवाद नहुने आज एमाले र माओवादी मिल्दैमा अधिनायबाद आउने कसरी हुन्छ ? यो चुनावका मुखको आरोप मात्रै हो । कम्युनिष्टहरुले कांग्रेसलाई पञ्चेहरुसँग मिल्न गयो र कांग्रेसले बाम गठबन्धनलाई अधिनायकबाद ल्याउन लाग्यो भन्नु उस्तै हो । तर यहाँ एमाले माओवादी हुन गएको हो या माओवादी एमाले हुन आएको हो भन्ने कुरा मुख्य हो । यदि एमाले माओवादी बन्न गएको भने त्यो खतरा हुन्छ । त्यस्तै कांग्रेसमा राप्रपा मिसिन आएको हो भने ठिकै हो । तर कांगे्रस राप्रपामा मिल्न गएको हो भने त्यो पनि खतरा नै हो । किनकि जनयुद्धमा निर्देशित माओवादीसँग एमाले मिल्दा कुन सिद्धान्तलाई आधार बनाए भनेर जसरी खोजी हुन्छ त्यसैगरी राजतन्त्रको भारी बोकेर हिंडेको राप्रपासँग कांग्रेस मिल्दा त्यस्तै सिद्धान्तको खोजी हुन्छ । एमाले र कांग्रेसका केहि कमी कमजोरी होलान् । तर यिनै दुई पार्टी हुन् जसले प्रजातान्त्रिक ढंगले देशलाई भोलि एकठाँउमा रहेर पनि निकास दिनु पर्नेछ । केहि समय देशको परिस्थिति नियन्त्रणमा रहुञ्जेल बाहेक यी दुई पार्टी भन्दा बाहिर रहेर देशलाई निकास दिन कठिन छ । र जान पनि हुँदैन ।
अधिनायकबाद आउने हल्ला कसरी चल्यो ?
कतै कतै त कांग्रेसलाई डर पनि होला । तर, कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । किनभने यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने जुन कुरा गरेका छन्, यहि संविधान अनुरुप चुनावमा भाग लिने, ठूलो पार्टी बनाउने, संक्रमणकाल टुंग्याउने, विकास र समृद्धिको यात्रामा देशलाई हिंडाउने भनेका छन् । यो उद्धेश्यले त देशमा स्थायित्व र विकास हुन्छ, कसरी अधिनायकवाद हुन्छ ?
अर्को कुरा, दुई ठूला पार्टी एक भए भने आफ्नो आकार खुम्चिन्छ भन्ने डर मात्र देख्छु म कांग्रेसमा । अधिनायकवादको कुरा भ्रम मात्र हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । र सम्भव पनि छैन । नेपाल अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गइसकेको छ । कुनै पनि दलले यसका आधारभूत सिद्धान्त बाहेकको अभ्यास गरेर टिक्न सक्ने आधार छैन । बरु यो अभ्यासलाई कसरी ब्यवस्थित र सुदृढ गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । कांग्रेसले लौ यस्तो हुन लाग्यो भनेर गरेको हल्लाखल्ला चुनावी रणअनीति मात्र हो । यो सबै चुनावका लागि गरिएको गलत प्रचार हो ।
अहिलेको संवैधानिक प्रक्रियामा निर्माणमा मुख्य योगदान गरेका र यसैमा बाँधिएका एमाले र माओवादी एउटै पार्टी हुँदा अधिनायकबादी ब्यवस्थामा सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
मैले अघिनै भनेँ केही अघिसम्म कांग्रेस माओवादीकै गठबन्धनमा थियो । त्यो बेला केही भएन । अनि अहिले एमाले माओवादी मिले अव अधिनायकवाद आउँछ भन्ने हल्ला केही दिन चलाउन सकिएला, कसैले पत्याउँदैन । त्यसमाथि अहिलेको संविधान बनाउने काममा एमाले माओवादी दुवै दलले अगुवाई गरे । अनि यही संविधानको अभ्यास गर्नेगरी एकताको कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो गर्दा अधिनायकवाद आउन लाग्यो भन्ने प्रचारलार्ई कसैले पत्याउने आधारै छैन ।
केही अघिसम्म कांग्रेस माओवादीकै गठबन्धनमा थियो । त्यो बेला अधिनायकवाद भएन भएन । अहिले एमाले माओवादी मिल्दा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने हल्ला केही दिन चलाउन सकिएला, तर कसैले पत्याउँदैन । अहिलेको संविधान बनाउन अगुवाई गरेका एमाले र माओवादी मिलेर यही संविधानको अभ्यास गर्नेगरी एकताको कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो गर्दा अधिनायकवाद आउन लाग्यो भन्ने प्रचारलार्ई कसैले पत्याउने आधारै छैन । यसले लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा मदत गर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिले निर्णाय प्रभाव चाहिँ किन राख्छन् ?
बिदेशी शक्ति एक्लै आउन सक्दैन । उ कसैको बुई चढेर मात्र आउँछ । तिनलाई पिठ्यूँमा बोकेर नेपालको भान्सामा ल्याउने पार्टी रहुञ्जेल यस्तै हुन्छ । आर्थिक र ब्यापारिक सम्बन्धमा हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ । तर हाम्रा आन्तरिक कुरामा हस्तक्षेप गर्नेगरी तिनलाई बोकेर ल्याउने प्रबृत्ति अत्य नभएसम्म यिनको प्रभाव यस्तै रहन्छ । विदेशी शीक्त त निम्त्याएपछि न आउने हो । नेपालका केही केस बाहेक सबै केसमा यिनले निम्तादिएर उ आएको होइन र ? हाम्रो आन्तरिक मामिलामा तिमी आउन पाउँदैनौ भन्नु पर्नेमा हाम्रो संविधान यसपटक संशोधन गर्न सकिएन अर्काे पटक बहुमत पुर्याएर गर्छाैं भनेपछि उ किन संशोधन गरेनौ भनेर आउने नै भयो । नआइज भन्दा बिदेशी शक्ति रोकिंदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले एक डेढ वर्षअघि देखेका छौं । हामीलाई हस्तक्षेप चाहिंदैन, समान हितमा सहकार्य गर्छाैं भनेर सवै राजनीतिक दलले किन नभनेका ? म सवै दललाई एउटै धारमा राख्दिनँ । तर, यहाँ मुख्य भूमिकामा रहेका केही दलले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप निम्त्याएका त हुन् नि । सत्तास्वार्थमा देशको हित साटिन्छ, अनि विदेशीलाई सजिलो हुँदैन त ? तर, अहिले जनता सचेत बन्दै गएका छन् । देशको हित विपरित हिंड्ने दललाई जनस्तरबाटै कार्वाही हुने बातावरण बन्दैछ । अब देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएका पार्टी बिस्तारै जनताको नजरबाट बढारिन्छन् ।
कुन दल केका लागि मिलेका भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । देशकै हितका लागि मिलेका भए देशको हित विपरित काम हुँदैन । तर, यहाँका कुनै दल त आफ्नो भन्दा पनि विदेशीकै एजेण्डा पूरा गर्नेगरी मिलेका देखिन्छन् । यो यो दल मिलाउने, बहुमत ल्याएर फलाना देशले संविधान संशोधन गर्नु भनेको छ संशोधन गर्ने भनेपछि त्यस्तो एकता त देशका लागि हितकर भएन नि ।